09/13/14 ~ MM Daily Star
ဒုတိယပိုင်း ( ၁၉၈၈-၂၀၁၀ ) သုံးသပ်တင်ပြခြင်း
ယောကျာ်းလေး အပြာသရုပ်ဆောင်များ အသဲအသန်လိုအပ်နေ
ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ် ဖြည့်တိုင်း အပိုဆောင်းငွေ ဘောနပ...
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းတူးဖော်မှု နတ်စင်တရာ ဆရာတော် ရှ...
12:20 အတွဲဆက်များ, နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါးများ No comments
၁၉၈၈ အခြေအနေကို သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် …
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ် အခြေအနေတွေက ….
စသုံးသပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကတည်းက …
တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေဟာ …
ဆိုးသထက် ဆိုးလာပါတယ် ….
ဆူပူမှုများ ကြိုးကြား ကြိုးကြားဖြစ်ပွားနေပြီး….
ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲကာနီး ဆန်ဆန် …
အစိုးရကို သရော်တဲ့ပြက်လုံးများက …
ပြန့် နှံ့ ခေတ်စားလျှက်ရှိပါတယ် …
၈၈ အရေးအခင်းကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရလျှင်…
လူထုရဲ့ ဆင်းရဲကျပ်တည်းမှု …
အထွေထွေ မကျေနပ်မှုတို့ ကြောင့် …
ဖြစ်ပွားလာရတဲ့အရေးအခင်းဖြစ်ပါတယ် …
အချိန်ကိုက် အမြတ်ထုတ်တဲ့ သူ ….
အဓိက ပါဝင်စွက်ဖက်ခဲ့တဲ့အုပ်စုအချို့ ရှိနေပါတယ် …
အဲဒီ အဖွဲ့ တွေကတော့ ….
(က) ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ …
(ခ) ဦးရဲထွန်း ဦးဆောင်တဲ့ဒညတ အဖွဲ့ 
(ဂ) ပြည်တွင်းရှိ သံရုံးတစ်ချို့ 
(င) နိူင်ငံခြားသားများ …
(စ) တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များ တို့ ဖြစ်ပါတယ် …
၈၈ အရေးအခင်း ဟာ …
လူထုရဲ့အထွေထွေမကျေနပ်မှုအခံကြောင့် ….
ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ဆိုပေမယ့် …
အထက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့ များရဲ့ စွက်ဖက်ချယ်လှယ်မှုကြောင့် ….
အသေအချာပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ….
ကျွန်တော့် အမြင်အရတော့ …
၈၈ အရေးအခင်းကြီး အတွင်းမှာ …
တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေအဖို့…
တစ်သက်စာ မှတ်သွားလောက်တဲ့…
ကိစ္စကြီး သုံးခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ….
မြို့ ကြီးတွေပေါ်က ဆူပူမှုတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့…
တပ်တွေ ကို အရွေ့ အပြောင်းလုပ်နေစဉ် ….
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်တွေက …
တစ်ပြည်လုံးမှာ အချိန်ကိုက် ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါ ….
၁၉၈၈ခုနှစ် မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ …
တပ်မ ၈ ခု သာ ရှိပါတယ် …
အဲဒီ ထဲကမှ တပ်မ ၄၄ ဟာ ဒေါန တောင်ဘက်ခြမ်းမှာ …
ကေအန်ယူ တပ်မဟာ (၆) ကို ရင်ဆိုင်ထားပြီး …
တပ်မ ၆၆ ဟာ ဒေါန မြောက်ဘက်ခြမ်း မှာ…
ကေအန်ယူ တပ်မဟာ (၇) ကို ရင်ဆိုင်ထားပါတယ် …
၈၈ အရေးအခင်း ဖြစ်ချိန်မှာ …
ရှေ့ တန်းက ရန်သူ နဲ့ ရင်ဆိုင်ထားတဲ့ ….
တပ်မ အချို့ ကို ပြန်ခေါ်ယူရပါတယ် …
ရှေ့ တန်းမှာ တစ်နှစ်နီးပါးရှိနေတဲ့….
တပ်မ ၆၆ တစ်မလုံးကို ပြန်ရုပ်ပြီး …
သထုံ ၊ဘီးလင်း၊ဖာပွန် စတဲ့…
သံလွင် အနောက်ခြမ်းကို ထပ်ဝင်ရပါတယ် …
အဲဒီဒေသက ရုပ်သွားတဲ့…
လပခ လက်အောက်ခံတပ်တွေက ( ယခု တပခ )…
မြို့ တွေပေါ်ကို ချီတက်ရပါတယ် …
တပ်မ ၆၆ နေရာတွေကို ….
တပ်မ၄၄က မျှပြီး ထိန်းထားပြီး ….
ရှေ့ တန်းမှာ ရန်သူတပ်မဟာ နှစ်ခုလုံးကို …
တပ်မ ၄၄ တစ်မတည်း နဲ့ဆိုင်ထားဖို့စီစဉ်တာပါ …
အဲဒီလို တပ်မတွေ နေရာ ရွေ့ ပြောင်းနေချိန်မှာ …
ကေအန်ယူဟာ အင်အားထောင်နဲ့ ချီပြီး ….
မဲသဝေါ ဒေသကို ၀င်တိုက်တဲ့ အတွက် ….
တပ်တွေအားလုံး ဖရိုဖရဲနဲ့အထိနာကုန်ပါတယ် …
ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး ….
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မှာလဲ ….
မိုင်းယန်းကို ဗကပ တပ်ရင်း ၁၃ ရင်းက …
၀ိုင်းဝန်းဖြတ်တောက် ပိတ်ဆို့ ပြီး …
အင်အား နှစ်ထောင်လောက်နဲ့ဝင်တိုက်ပါတယ် ..
မူဆယ် ၊ ကြူကုတ် ၊ပန်ဆိုင်း စတဲ့ နေရာတွေကို …
ဆက်တိုက် သိမ်းပိုက်ဖို့ အစီအစဉ်လုပ်ထားပြီးသားပါ…
မိုင်းယန်း က တပ်ရင်းဟာ စစ်ကူတွေကို စောင့်ရင်း …
၈ရက်လုံးလုံး မဆုတ်ပဲ အသေခံ ခုခံနေခဲ့တဲ့ အတွက်
မိုင်းယန်း ကျမသွားခဲ့ပါဘူး ….
တပ်ရင်းမှူး နဲ့ အရာရှိ ၄ယောက် အပါအ၀င် …
စစ်သည်တွေပဲ အများအပြား ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် …
တစ်ခါ ကေအိုင်အေကလဲ …
အင်အား ၈၀၀ နီးပါးနဲ့ဒေါ့ဖုန်းယန် ကို ၀င်တိုက်ပါတယ် …
ဗန်းမော်တစ်ဝိုက်က တပ်စခန်းတွေ အတိုက်ခံရပါတယ် …
မိုးညှင်းကို ၀င်တိုက်တဲ့ ….
ကေအိုင်အေတပ်ရင်း ၅ နဲ့ တပ်ရင်း ၁၁ဟာ….
မြို့ တစ်ဝက်လောက်ကို စီးမိလုနီးပါး ဖြစ်သွားပါတယ် …
ရဲစခန်းကို မီးတင်ရှို့ လိုက်ပြီး …
အချုပ်သား ၇၇ ယောက်ကို ခေါ်ထုတ်သွားပါတယ် …
ငွေတိုက်ထဲက ငွေတွေပါ မသွားပါတယ် …
တစ်နိူင်ငံလုံးမှာ တစ်ပြိုင်နက် နီးပါး …
အများအပြား ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ ….
အင်အားနည်းတာနဲ့များတာ …
တိုက်ပွဲ ကြီးတာနဲ့သေးတာ ဒါပဲကွာပါတယ် …
တပ်တွေဟာ မြို့ တွေပေါ်မှာလဲ …
ဆူပူမှုတွေ ထိန်းရ …
ရှေ့ တန်းမှာလဲ ရန်သူက ၀ိုင်းတိုက် …
သူ့ စစ်ကူမလိုက်နိူင် …
ကိုယ့် စစ်ကူမလိုက်နိူင် နဲ့…
အတော် အရူးမီးဝိုင်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် …
တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့….
၈၈ အရေးအခင်းဟာ …
မြေအောက်အဖွဲ့ အစည်းတွေ နဲ့…
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေ က …
သူတို့ ကို အချိန်ကိုက် တစ်ပြိုင်တည်း …
ချေမှုန်းဖို့ လုပ်ခဲ့တဲ့အရေးအခင်းလို့….
စွဲနေအောင် မှတ်ယူသွားပါတော့တယ် ….
ဒုတိယ ကိစ္စကတော့ …
ပြည်ပ က ကျူးကျော်လာတဲ့တပ်တွေ ကိစ္စပါ ….
ဒီလောက် အရူးမီးဝိုင်း ဖြစ်နေချိန်မှာ …
ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်မှာ ….
အမေရိကန်ရေတပ်က ရောက်လာပြီး ….
တရုတ် သံချပ်ကာ တပ်မတွေ ရဲ့…
ရွေ့ ပြောင်းလှုပ်ရှားမှု သတင်းဟာ ….
တပ်မတော် က တာဝန်ရှိသူတွေအပေါ် …
ဘယ်လောက် ခြိမ်းခြောက်နိူင်စွမ်း ရှိမယ်ဆိုတာ …
မှန်းဆကြည့်လို့ ရနိူင်ပါတယ် …
အစိုးရ ယန္တရား တစ်ခုလုံး ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့ ကိစ္စပါ ….
၁၉၄၈ အင်းစိန်တိုက်ပွဲကာလကို မမီလိုက်တဲ့…
တပ်မတော် ရဲ့ တတိယမျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်တွေအဖို့….
အတော်ကြီး အံသြစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါ…
အစိုးရ ရုံးတွေအားလုံးကို …
သပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေက ထိန်းချုပ်ထားပြီး …
သူတို့ အချင်းချင်းလဲ မညီမညွတ်နဲ့ …
တစ်ယောက်တစ်မျိုး ပြသနာတွေ တက်နေပါတယ် …
ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ….
ရဲတပ်ဖွဲ့ နဲ့တပ်က စစ်သည်အချို့ တောင် …
တစ်ဖက်အုပ်စုတွေကို ပူးပေါင်းတဲ့သူက ပူးပေါင်းကုန်ပြီး …
တစ်ပြည်လုံးမှာ တပ်မတော် တပ်ရင်းတွေ အချင်းချင်းပဲ …
အဆက်အသွယ် မပြတ် ….
ကျန်နေခဲ့တော့တာ ဖြစ်ပါတယ် …
တစ်ခါ ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနတွေကနေ …
ဘယ်တပ်မ က အင်အားဘယ်လောက်က …
ဆန္ဒပြသူတွေ နဲ့ပူးပေါင်းသွားပြီ…
တပ်မ တစ်မလုံး တောခိုသွားပြီ …
စသဖြင့် တောက်လျောက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ သတင်းတွေဟာ ….
အနောက်အုပ်စု အနေနဲ့…
နိူင်ငံရေး သမားတွေနဲ့ပေါင်းပြီး …
သူတို့ ကို မပြိုကွဲ ပြိုကွဲအောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့…
ယူဆယုံမှ တစ်ပါး ….
ဒီဖြစ်ရပ်ကြီး သုံးခုဟာ …
တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အသည်းထဲမှာ …
ဒီကိစ္စဟာ တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းထားတဲ့….
၂၂ နှစ်တာ ကာလကို …
အကြီးအကျယ် အကျိုးသက်ရောက်စေမှာပါ …
သူတို့ နောက်တစ်ကြိမ် လုံးဝ ....
ဒါမျိုး ထပ်အဖြစ်ခံတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ....
အကြီးအကျယ် အင်အားတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေ….
တပ်မ အသစ်တွေ အများအပြား …
နေရာချ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေ …
အစိုးရ ယန္တရား တစ်ခုလုံးကို ….
နေပြည်တော် ကို ရွေ့ ပြောင်းပြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေ …
၀န်ကြီးဌာနတွေနဲ့မြို့ ပြအုပ်ချုပ်ရေးမှာ….
တပ်မတော်သား အငြိမ်းစားတွေကို ….
ရွေ့ ပြောင်းနေရာယူစေခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေ …
အနောက်အုပ်စု ကို အရမ်းသတိကြီးကြီး ထားပြီး …
သံသယ အပြည့်နဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာတွေ …
ဒါတွေဟာ ဒီကိစ္စသုံးခု ရဲ့….
ဧကန်မုချ မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲ ဖြစ်ပါတယ် ….
တပ်မတော် က အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ…
န၀တ ရဲ့လက်ထဲကို ရောက်ရှိလာတဲ့…
တိုင်းပြည်ရဲ့ အနေအထားဟာ …
တစ်မျိုးသားလုံး ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး ဂျီဒီပီ….
၄၇၁၄၁သန်းပဲ ရှိပါတော့တယ် …
၈၈ အရေးအခင်းအတွင်း …
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး အရပ်ရပ်ဟာ …
၆၂၈.၄သန်း ဖြစ်ပါတယ် …
ဒါက ပြသနာ မဟုတ်သေးပါဘူး …
ပြသနာက ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ အားလုံးရပ်တန့် …
ကုန်စည် စီးဆင်းမှု ရပ်တန့်...
စက်မှုကုန်ကြမ်းတွေ ပြတ်လပ် ....
ဘဏ်တွေမှာလဲ ငွေမရှိ …
ဒီလိုအနေအထား ဖြစ်နေတာပါ ….
အရန်စက်သုံးဆီ လက်ကျန် ....
သုံးလအတွင်း ပြည်ပက မတင်သွင်းနိူင်တော့ရင် …
ယာဉ်တွေအားလုံး စက်ယန္တရားတွေအားလုံး …
ရပ်ထားရတော့မယ့် အနေအထားလို့ ဆိုပါတယ် ..
တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် …
သတင်းထောက် ဘာတီးလစ်တနာက …
Far Eastern Economic Review စာစောင်မှာ …
န၀တ အစိုးရ ရဲ့ နိူင်ငံခြားအရန်ငွေဟာ …
ဒေါ်လာရှစ်သန်းထက် ပိုမရှိနိူင်ဘူးလို့ တွက်ပြခဲ့တဲ့ အပြင် …
အစိုးရ အနေနဲ့နှစ်လသုံးလအတွင်း …
ဒေါ်လာ၁၅သန်းထက် ပိုမရှာနိူင်ဘူးလို့…
ဒေါက်တာ သန့် မြင့်ဦး က …
သူရဲ့ နာမည်ကျော် ခြေရာပျောက်မြစ် စာအုပ်မှာ ….
၁၉၈၈ ခုနှစ် ရဲ့ နောက်ဆုံးလများမှာ…
တိုင်းပြည်ရဲ့ နိူင်ငံခြား အရန်ငွေဟာ …
ခြေစောင့်လက်စောင့် ပမာဏကို မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ် ….
အရင်အစိုးရ အဆက်ဆက်က တင်နေခဲ့တဲ့….
တစ်နှစ်ပေးရတဲ့ အတိုးကိုက …
ဒေါ်လာ သန်းနှစ်ရာကျော် ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ….
အရင်ရနေကြ နိူင်ငံခြားငွေရဲ့ ၉၀ရာခိုင်နူန်းဟာ …
အနောက်ဂျာမနီ ၊ ဂျပန်နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွေက ရတာဖြစ်ပြီး…
လုံးဝ ရပ်စဲသွားပြီ ဖြစ်လို့….
ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းတစ်ခုတည်းနဲ့ တင် …
န၀တ အစိုးရက ဒူးထောက်တောင်းပန်ရမယ့်သဘော…
မဖြစ်မနေ ညှိနိူင်းရမယ့် အခြေအနေကို ….
ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီ လို့ လဲ ဆိုပါတယ် ….
န၀တ အစိုးရဟာ ….
ဒေါက်တာဘမော် လက်ထက်မှာ …
ဂျပန်အစိုးရက လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့….
တိုကျိုမြို့မြန်မာသံရုံးပိုင်မြေ ရဲ့ ပန်းခြံနေရာကို …
ဒေါ်လာ သန်း၂၀၀ နဲ့ရောင်းချလိုက်ပါတယ် …
၈၈ ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလပိုင်းတွေကို ….
တောင့်ခံ ဖြတ်သန်းနိူင်ဖို့….
သူ့ မှာ ငွေအနည်းအကျဉ်း ရှိသွားခဲ့ပါပြီ …
၈၈ - ၂၀၁၀ တပ်မတော် အစိုးရ အပေါ် …
စစ်တပ်က တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ…
အထက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကို …
လက်ခံ ရရှိခဲ့တဲ့အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ တော့ ….
ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိူင်ဖွယ်မရှိပါဘူး …..
တပ်မတော် အစိုးရ နေရာက ကြည့်မယ်ဆိုရင် …
သူတို့ ဟာ တစ်စစီပြိုကွဲတော့မယ့် တိုင်းပြည်တစ်ခုကို …
၀င်ပြီး ထိန်းသိမ်းတာဝန်ယူလိုက်ရတာပါ ….
ပထမဆုံး တိုင်းပြည်ကို တည်ငြိမ်အောင်လုပ် …
ပြိုလဲလုဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးကို ...
ရတတ်သမျှနဲ့ကျားကန် …
တည်ငြိမ်စ ပြုလာတဲ့ အချိန် …
နိူင်ငံရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲ ….
တိုင်းပြည်ကို တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ် …
ယခု ပြည်ပ အလုပ်သမား သန်းဂဏန်းဟာ…
စစ်အစိုးရက တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့မူဝါဒကြောင့် …
ပြည်ပကို ထွက်ခွင့်ရသွားတာ ဖြစ်ပါတယ် …
နိူင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေး စနစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် …
နိူင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေ ပေါ်ထွက်လာပြီး …
လက်ရှိ ပါတီစုံစနစ်နဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေး ကို …
ရှေ့ ရူခဲ့ပါတယ် …
တတိယအဆင့်အနေနဲ့…
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေနဲ့….
အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့ပါတယ် ….
မူးယစ်ဆေးဝါး မလုပ်ရ …
ကိုယ့်ဒေသကိုယ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ် …
နောက် တက်လာတဲ့အရပ်သားအစိုးရကျရင် …
နိူင်ငံရေး ဆက်ဆွေးနွေး ….
ဒီလို အနေအထားနဲ့ ပါ ….
အပစ်အခတ်မရပ်တဲ့...
ကေအန်ယူတပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့…
မော်ဖိုးကေ မဲလ ၀ါးခသစ် ၀ါးခဟောင်း မာနယ်ပလော …
စတဲ့စခန်းတွေကိုတော့ …
အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ပါတယ် …
စတုတ္ထ အဆင့်ကတော့ …
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးတာပါပဲ ….
ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ အန်အယ်လ်ဒီ အနိူင်ရခဲ့ပါတယ် …
ဒါပေမယ့် အာဏာကို လွှဲပြောင်းမပေးခဲ့ပါဘူး …
ဒီကိစ္စမှာ ကျွန်တော့်အမြင်က အချက်သုံးချက်ရှိပါတယ် …
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အဖွဲ့ ဟာ …
အရေးအခင်းကာလက ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ ပြီး …
သူတို့ ကို အာဏာလွှဲပေးဖို့…
စိုက်လိုက်မတ်တတ် တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ ပါ …
တစ်ခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီး အနေနဲ့ လဲ …
၈၈ အရေးအခင်းကို ကမကထ လုပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ …
တစ်ယောက်အပါအ၀င် ဖြစ်ခဲ့တာကို ငြင်းမရပါဘူး …
ပြည်ပ အသံလွှင့်ဌာနတွေကလဲ …
သူတို့ အဖွဲ့ ကိုပဲ အတင်းအဓမ္မ စင်ပေါ်ကို တွန်းတင်ဖို့…
တောက်လျှောက် ကြိုးစားနေတဲ့သဘောရှိပါတယ် ….
ဒါကြောင့် န၀တ အစိုးရအနေနဲ့ဒီအဖွဲ့ ကို …
အတော် သတိကြီးကြီးထားပြီး …
ဆက်ဆံနေတဲ့သဘောရှိပါတယ် …
ဒါက ပထမ အချက်ပါ ….
တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အဖွဲ့ ရဲ့….
ကြားဖြတ်အစိုးရ အစီအစဉ်ဟာ ရေစုန်မျှော သွားရပါတယ် …
ဒီအတွက် တပ်မတော်အပေါ် …
အမြင်မကြည်လင်မှာကတော့ အထူးပြောစရာ မလိုပါဘူး ….
၁၉၈၈ စက်တင်ဘာကနေ ….
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့၁၉၉၀ မေလအထိ …
အန်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ ဟာ …
လူထု လှုပ်ရှားမှု အများအပြားကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် …
ဒီ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ …
န၀တ အစိုးရ နေရာက ကြည့်ရင် …
သူတို့ ကို တစ်ချိန်လုံး ကန့် လန့် လိုက်တိုက်နေတယ် …
ဆူပူမှုတွေ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လိုက်လုပ်နေတယ်…
အန်အယ်လ်ဒီဟာ သူတို့ အပေါ် …
သဘောထား အရမ်းတင်းမာတယ်လို့ ပဲ …
တစ်ထစ်ချ ယူဆရတော့မှာပါ ….
ဒါက ဒုတိယအချက်ပါ …
၈၈ တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာ ….
တောထဲကို ရောက်ကုန်တဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ …
ဒီလူတွေဟာ လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးပါပြီ…
တပ်နေရာက စဉ်းစားရင်တော့ ရန်သူပါပဲ ….
အန်အယ်လ်ဒီဟာ ဒီအဖွဲ့ တွေနဲ့…
တစ်ချိန်လုံး အဆက်အသွယ်လုပ်နေပါတယ် …
ပိုဆိုးတာက ၄၈ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက …
တပ် နဲ့ အသေအကြေ တိုက်လာကြတဲ့အဖွဲ့ တွေကပါ ….
အန်အယ်လ်ဒီ နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်လာကြတာပါပဲ …
တပ်နေရာက စဉ်းစားရင် …
ဒါဟာ တကယ့်ပြသနာပါ ….
သူတို့ရန်သူတွေနဲ့အရမ်းအဆင်ပြေနေတဲ့ သူကို …
အာဏာလွှဲပေးရမယ့် သဘောဖြစ်နေပါတယ် …
တပ်မတော် ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် …
တကယ် စိတ်ပူစရာ အနေအထားပါ …
( အဲဒီကာလမှာ တပ်က ခေါင်းဆောင်တွေအဖို့…
ဘာ မသမာခြစားမှုတွေမှ မရှိသေးပါ… )
မီးလောင်ရာလေပင့် ဖြစ်သွားတာကတော့ …
နူရင်ဘတ် ကိစ္စပါ …
ပြောတယ် မပြောဘူး …
အဲလို ဆိုလိုတယ် မဆိုလိုဘူး စသဖြင့် …
တစ်ဖက်က အယူအဆမှားနိူင်တဲ့….
အဲဒီလို ဆန်ဆန် စကားမျိုး ….
ပြောခဲ့တာကတော့ သေချာပါတယ် …
ဒီအချက် သုံးချက်ကြောင့် …
ချက်ချင်း အာဏာလွှဲမပေးတော့တာလို့ ယူဆပါတယ် …
ဒီနေရာမှာ သတိပြုစရာ အချက်တစ်ချက် ရှိနေပါတယ် …
ရန်ကုန်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွှန့် က …
ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပြီးရင် …
ကျွန်တော်တို့ က အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲဖို့…
နှစ်နှစ်လောက် တာဝန်ယူအုန်းမယ်လို့…
Asia's Week စာစောင်ကို ထုတ်ပြောဖူးတဲ့ ကိစ္စပါ ….
ဒီအချက်ကို ထောက်ရင် …
န၀တ အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သူနိူင်နိူင် …
လက်လွတ်စပယ် အာဏာလွှဲမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ …
သေချာသလောက် ရှိပါတယ် ….
အာဏာမလွှဲသေးဘူး ဆိုတာ ….
န၀တ ၊ နအဖ အစိုးရဟာ …
တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး ကို ….
အများအပြား လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲ …
ဘယ်လိုမှ ငြင်းမရတဲ့ကိစ္စလို့ မြင်ပါတယ် …
ဧရာဝတီ မြစ်တစ်ခုတည်းပေါ်တင် ….
မြစ်ကူးတံတားကြီး ဆယ်စီး အသစ်ဆောက်ခဲ့ပါတယ် …
အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း ၇၀၀၀ နီးပါး တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ် …
၈၈ခုနှစ်မှာ တက္ကသိုလ် ကောလိပ် ၃၂ ခုပဲရှိခဲ့ပေမယ့်…
၂၀၁၀ မှာ ၁၅၆ ခု ဖြစ်နေပါပြီ ….
ကျန်တဲ့ ကဏ္ဍ အသီးသီး မှာလဲ ….
သူတို့ တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ အများကြီးပါ ….
အခုလက်ရှိ လှိုင်သာယာ ၊ ရွှေပြည်သာစတဲ့မြို့ သစ်တွေဟာလဲ …
မိုးပေါ်က ကျလာခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ….
အမြဲပဲ ဟာသလုပ်ခံနေရပေမယ့် ….
သူတို့ နိူင်သလောက် စွမ်းသလောက် …
ဘယ်လိုမှ ငြင်းမရတဲ့ သက်သေပါပဲ ….
၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်မီက တပ်မတော်ဟာ …
အင်အား ၂သိန်းပျော့ပျော့သာ ရှိပါတယ် …
အခု အင်အား ၅သိန်းဝန်းကျင် နဲ့…
ခေတ်မီလက်နက်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ တပ်မတော်တစ်ခုအဖြစ် ….
အနှစ် ၂၀ လောက်အတွင်း ….
သူတို့ တည်ဆောက်ပြစ်လိုက်ပါတယ် ….
ဒီနေရာမှာ အထူးတလည်ပြောရမယ့် ကိစ္စဟာ …
လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး အခြေအနေပါ ….
လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး အခြေအနေလောက် …
သမိုင်းမှာ ဘယ်တုန်းကမှ နီးနီးကပ်ကပ် …
န၀တ၊နအဖ စစ်အစိုးရကပဲ ….
ဖောင်ဒေးရှင်းချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် …
ဒါဆို ၂၂ နှစ် ကာလအတွင်း …
စစ်အစိုးရဟာ ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင်လားလို့ …
မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိလာပါတယ် …
စစ်အစိုးရမှာ အမှားအယွင်းနဲ့ အမည်းစက်တွေ …
ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်စေတဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီးပါ …
အထူးသဖြင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ချို့ ရဲ့ မသမာခြစားမှုတွေဟာ….
အတော်ကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ….
တိုင်းပြည်က ဆင်းရဲနေတဲ့ အချိန် …
ခေါင်းဆောင်တစ်ချို့ ရဲ့ မိသားစုတွေက …
မသမာမှုတွေနဲ့ချမ်းသာနေကြတဲ့ ကိစ္စဟာ …
ဘယ်လိုမှ ခွင့်မလွှတ်နိူင်စရာပါပဲ ….
အမှားအယွင်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့စီမံကိန်းတွေ …
အလေအလွင့်ဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ပရောဂျက်တွေ တစ်ပုံကြီးပါ …
ဒါလဲ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မရှိပါဘူး ….
ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရဟာ …
တိုင်းပြည်ကို တမင်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ် …
ရှိသမျှ သယံဇာတအကုန်ရောင်းစားပြီး …
ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးစွဲခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ …
ကျွန်တော် လုံးဝ လက်မခံနိူင်ပါဘူး …
သူ့ အနေနဲ့…
မဟာဗျူဟာကြီးတစ်ခု ရေးဆွဲပြီး …
တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ခဲ့တယ် …
အဲဒီ မဟာဗျူဟာကြီးကို ၇၀ ရာနူန်းလောက် …
အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်နိူင်ခဲ့တယ် လို့ ပဲ …
သုံးသပ် ယူဆပါတယ် …
မဟာဗျူဟာ အကြီးကြီးတစ်ခုထဲက …
မအောင်မြင် အလွဲသုံးစားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ ကို သာ….
တွင်တွင်လက်ညိုးထိုး အဆက်မပြတ် High light လုပ် …..
စစ်အစိုးရက တိုင်းပြည်ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီလို့ ….
ငယ်သံပါအောင် အော် နေတဲ့ သူတွေကို ….
တစ်ချက်လောက် မေးကြည့်ချင်ပါတယ် …
ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေဟာ …
၁၉၈၈ ခုနှစ်ကထက် ပိုဆိုးလာခဲ့သလား ???
ပိုကောင်းလာခဲ့သလား ???? ။ ။
( တတိယပိုင်း ဆက်တင်ပါမည် )
12:16 နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
ရှီမီကန်ဟာ ဂျပန်လူကြီးဇာတ်ကားလောကတွင် ဘုရင်တပါးလို့ လူသိများသူဖြစ်တယ်။ သူဟာ ယနေ့အချိန်အထိ ၁၆နှစ်တာကာလအတွင်း အပြာကားပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်မှာ သရုပ်ဆောင်စွမ်း ပြသခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားသိတဲ့သူအနေနဲ့ သူ့ကို အလုပ် လုပ်လွန်းသူတယောက်လို့ ထင်မိမယ်။ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ သူတို့အလုပ်လောကမှာ ယောင်္ကျားရှားပါမှု ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အားလုံးပေါင်းမှ အယောက် ၇၀ ကျော်လောက်ပဲ ရှိတယ်၊ အဲဒီအရေအတွက်က ဘန်ဂေါကျားအရေအတွက်ထက် နဲပါတယ်” လို့ ရှီမီကန်က
သူ့ Twitter ပေါ်မှာ ရေးတယ်။
“အဲဒီအထဲမှာမှ ပုံမှန်သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ ယောင်္ကျားအရေအတွက်ဆို အရမ်းနဲပါတယ်၊ အမျိုးသမီးတွေကျတော့ တစ်သောင်းလောက်ရှိတယ်၊ တလကို ကားပေါင်း လေးထောင်လောက်ထွက်နေတယ်၊ ယောင်္ကျားလုံးဝမလောက်ဘူးဗျာ” …
အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများရဲ့ တိကျမှုကို အာမ မခံနိုင်ပေမယ့် ၂၀၁၂ခုနှစ်တုန်းက Livedoor News သတင်းဖော်ပြချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အပြာကားလောကမှာ
နှစ်စဉ် အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်သစ် ၆၀၀၀ ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း မျက်စိစုံမှိတ် ယုံကြည်၍လို့မရနိုင်သော်ငြား ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ယောင်္ကျားရှားပါမှုပြဿနာက တော်တော်ကြီးပါတယ်။ ဒီသရုပ်ဆာင်တွေပဲ ကားပေါင်းများစွာမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေနေရတာပါ။ အခြားအပြားကား လောကထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာလဲ ဒီပြဿနာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ရှီမီကန်က အမျိုးသားတွေကို သူတို့လောကထဲ ၀င်လာဖို့ twitter
ကတဆင့် တိုက်တွန်းရတာ ဖြစ်တယ်။
သူ့ရဲ့ (တွိ)ပို့စ်ကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ကြတာ အကြိမ် ၃၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးသော အွန်လိုင်းဖိုရမ် 2ch ပေါ်မှာလည်း အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးကြတယ်။
“ရှီမီကန်လို ကြွက်သားထောင်းထောင်းနေတဲ့သူထက် အသက်ကြီးကြီး
“ယောင်္ကျားသရုပ်ဆောင်တွေဘ၀က တော်တော်ခက်ခဲမှာပဲ၊ သူတို့ကို လေစားရမယ်”
….. စသဖြင့် ဆွေးနွေးခန်း ဖွင့်ကြလေတယ်။
ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ် ဖြည့်တိုင်း အပိုဆောင်းငွေ ဘောနပ်စ် ၂ ဆ ပေးမည့် အစီအစဉ်
12:15 သတင်း No comments
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုခြင်း အထိမ်းအမှတ်အနေနှင့် အပိုဆောင်းငွေ ဘောနပ်စ် ကို ၂ဆ ပေးသည့် အစီအစဉ်ကို စက်တင်ဘာလ ၁၃ရက် နှင့် ၁၄ရက်နေ့ များတွင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ် ဖြည့်သွင်းတိုင်း ဘောနပ်စ် ၄၀% မှ ၆၀% အထိ ရယူလိုက်ပါ။
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော MPT သုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများအတွက် MPT ၏
ကြိုတင်ငွေ ၅၀၀၀ကျပ် လျှင် ဘောနပ်စ် ၂၀၀၀ကျပ် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကြိုတင်ငွေ ၁၀၀၀၀ကျပ် လျှင် ဘောနပ်စ် ၆၀၀၀ကျပ် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကြိုတင်ငွေ ၂၀၀၀၀ကျပ် လျှင် ဘောနပ်စ် ၁၂၀၀၀ကျပ် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကြိုတင်ငွေ ၃၀၀၀၀ကျပ် လျှင် ဘောနပ်စ် ၁၈၀၀၀ကျပ် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
-------------------------------------------------------------------------------------- DOUBLE TOP UP BONUS PROMOTION
On September 13th and 14th, asacelebration of our new brand launch, we are doubling your bonuses. Enjoy 40% to 60% bonus on all your recharges!
Top-up 5,000 Ks and receive 2,000 Ks bonus credit!
Top-up 10,000 Ks and receive 6,000 Ks bonus credit!
Top-up 20,000 Ks and receive 12,000 Ks bonus credit!
Top-up 30,000 Ks and receive 18,000 Ks bonus credit!
For more details please access our website:
‪#‎YMG‬ (မှတ်ချက် = ယခု ပေးနေသော အပိုဆောင်းငွေ ဘောနပ်စ် ၂ ဆ မှာ ယခုလကုန်(စက်တင်ဘာလ ၃၀) ရက်နေ့အထိသာ အကြုံးဝင်ပြီး အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် လက်ကျန်ငွေများ ပြန်လည်ဖြတ်တောက်ခံရနိုင် သည်)
12:14 ဘာသာရေး No comments
စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လည် ၁ နာရီ၌ သန်လျင်မြို့နယ် ၊ ကျိုက်ခေါက်ဘုရား အလွန် နတ်စင်တရာကျောင်းတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို လာရောက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ပဲခူးမြစ်၊ ပုဇွန်တောင်ချောင်းနှင့် ရန်ကုန်မြစ် စသည့် မြစ် ၃ ခု ဆုံရာ ရန်ကုန်မြစ်ဝ အနီးတွင် ရက်ပေါင်း ၃၄ ရက် အကြာ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့အထိ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်း တူးဖော်မှုမှာ ယနေ့အချိန်ထိ ထူးခြားမှု မရှိဘဲ လူစိတ်ပါဝင်စားမှုပါ လျော့ကျလာသဖြင့် ခေါင်းလောင်းကြီး ဆယ်ယူတူးဖော်နေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံး အခြေအနေများအား နတ်စင်တရာ ဆရာတော်ကြီးက ရှင်းလင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကို တူးဖော်နေသည့် ဦးစံလင်းနှင့် အဖွဲ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန်မှု မရှိခြင်း ၊ ခေါင်းလောင်းရှာဖွေနေသည့် ရေငုတ်သမား ခေါင်းဆောင် ဦးသန်းညွှန့်ဆိုသူက မွန်သတင်းအေဂျင်စီ တခုအား ခေါင်းလောင်းတွေ့ရှိခြင်းမှာ လုံးဝ မဟုတ်မှန်ဘဲ သဘောင်္ပျက် တစီးသာ တွေ့ရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းတို့ကြောင့် ထိုအကြောင်းအရာများကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရှိထားသည့် နတ်စင်တရာ ဆရာတော်ကြီးက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းများ မီဒီယာများသို့ အစဉ်တစိုက် ဖြေကြားပေးနေသူ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့မှ ဦးကြည်ဝင်းက “ အခု ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ အားလုံးကို ဆရာတော်ကြီးက သိတယ်။ ရေငုတ်သမား ကိစ္စ ၊ ငွေရေး ကြေးရေး ကိစ္စတွေ အပါအ၀င် အကုန်လုံး ရှင်းပြလိမ့်မယ် ” ဟု ဆိုသည်။
သို့သော် ခေါင်းလောင်းကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ရန် ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၅၅ လမ်းတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အထောက်အကူပြု အဖွဲ့မှ ဦးနိုင်မင်းအောင်ကမူ ဦးစံလင်းနှင့် အဆက်အသွယ်မရသည်မှာ အချိန်ကြာပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြိုးစားဆက်သွယ်သော်လည်း ဖုန်းပိတ်ထားကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ ရေငုတ်သမားတွေက သဘောင်္ပျက်တွေ့တာကို ဦးစံလင်းက ခေါင်းလောင်း တွေ့တယ်ဆိုပြီး သတင်းထုတ်တဲ့ သဘော ဖြစ်သွားတယ်။ ကြည့်ရတာ ဘိုးတော်အခါ ပေးတာကို လိုက်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပဲ ” ဟု အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ဝင် တဦးက ပြောသည်။
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီး ရှာဖွေမှု စတင်ခဲ့စဉ် သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းမှ စက်တင်ဘာ လကုန်ပိုင်းအထိ ခေါင်းလောင်းရှာဖွေရာ နေရာအနီးသို့ စိတ်ပါဝင်စားသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ လာရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ လာရောက်ကြည့်ရှု့လေ့လာသူ နည်းပါးလျက် မရှိသလောက်ပင် ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။